Qiimaha Korontada oo Kor u Kacay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Magnus Hjalmarson Neideman/Scanpix.
Qiimaha Korontada oo Kor u Kacay
La daabacay tisdag 1 november 2011 kl 10.32
Laga bilaabo koowda bishan noveember ayuu dalkan ka bilowdey nidaam cusub ee la xiriira qiimaha quwadda korontada loona qeybiyey afar qeybood. Iyadoona labada qeybood ee dhaca koonfurta dalkana uu qiimuhu ka badnaan doono kuwa dhaca waqooyiga.
Go'aankan ayuu ka dambeeyey guddiga maamulka ururka Midowga Yurub, maadaama ey gobollada dhaca koonfurta dalka ka jirto koronto yari halka uu carriga waqooyigana ey wax soo saarka korontadu ku badan tahay. Qeybta saddexaad ee afarta qeeybood ee magaalooyinkaa, waa Istockholm iyo Göteborg ayaaney ku fileeyn quwadda korontada ee laga helo shirkadaha ku shaqeeya nuclearka ee Forsmark, Ringhals iyo Oskarshamn. Halka qeybta afaraad ee gobolka Iskåne iyo Blekinge ey ka jiraan koronto yari.
Gobollada dhaca koonfurta dalka ayaa ku xiran carriga waqooyi sidii quwad koronto looga soo gaarsiin lahaa, iyadoona aaney shirkaduhu ka soo bixin sidii korontada loo soo gaarsiin lahaa. Waana mid caqabad dheeriya ku noqoneeysa kolka la gaaro xilliga qaboobaha ee koonfurta looga baahdo quwad koronto ee ka badan xilliyada kale. Waa midda sababtay go'aanka maamulka EU-du ku gaaray iyo sidii qiimaha loogu saleeyn lahaa:
- Danta laga lahaa ayaa ah sidii Loogu xiisa gelin lahaa shirkadaha ka baayac-mushtara quwadda korontada hor-u-mar wax-soo-saar. Qaasatan gobollada dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka.
Halka sidoo kale maamulka EU-du ku tala-jiro dhismaha quwad-koronto ee waddammada dhaca waqooyiga Yurub iyo sidii loo sahli lahaa in quwad koronto ee dalkan laga soo saaro loogu gudbin kari lahaa koonfurta qaaradda. Waana mid kor u dhigeeysa quwadda korontada ee carriga koonfureed ee Iswiidhen, kolka qiimaha korontada ee qaaraddu kor u kacaba.
Waana mid ey dareemeen dadyowga heshiiska ku galay qiimaha joogtada ah ee aan is bedbedelku ku dhicin, sida uu sheegey Magnus Torstenson, kuna howl-gala saadaaliye quwadda korontada: